Dawladda Somalia oo ku eedaysay Shirkadaha qaarkood inay Argagixisadda taageeraan. – Balcad.com Teyteyleey
Raisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo kulan qaas ah la yeeshay madaxda dowladaha Ingiriiska, Norway iyo Midowga Yurub wuxuuna ka hor qiray in ay ku adkaatay la dagaalanka musuqmaasuqa iyo Horumarinta Ilaha Dhaqaalaha, taasoo lagu sheegay in lagu gaari karo Canshuur Celin ka timaada Ganacsatadda Soomaaliyeed.
Raisul wasaaruhu wuxuu farta ku fiiqay shirkado gaar ah oo curyaaminaya hanaanka dowladdu rabto inay wax ku maamulaan. kuwaas oo uu ka xusay Shirkadaha Hormuud, Salaam Bank, Dahabshiil, iyo Maamulayaashooda ay ka midka yihiin Axmad Maxamad Yuusuf, Cabdirashiid Ducaale, iyo Maxamad Yuusuf Axmed Aloore.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo raisul-wasaare Hassan Ali Kheyre waxay wajahayeen siyaasad ka tanweyn iyo qalqal dhinaca ammaanka ah oo aaney marnaba fileyn.
Laga soo bilaabo bishii Febraayo ee sanadkan markii si rasmi ah loo doortay madaxweynaha cusub, dowladdu lama aysan iman qorshe dhab ah oo ay kula dagaalamayaan kooxda Alshabaab, arintaasina waxay walaac gelisay saaxiibada reer galbeedka ah ee ku dhow dowladda Soomaaliya.
Dalalka galbeedku waxay ka cabsi qabaan in maamulka hada jira aysan awood u laheyn inay la yimaadaan fikir iyo qorshe looga hortegi karo kooxda argagixisada ah.
Warbixintan waxaa Qoray African Intelligence iyo Wargayska Indian Ocean News Letter, iyadoo lagu baahiyay wakaaladaha wararka iyo warbaahinta caalamka.
Wararkii ugu Danbeeyey Dowlada Qatar oo ku dhawaaqday Go’aankeedii ugu Danbeeyey